Xiisadii Siyaasadeed ee Hirshabeele oo Xal laga gaaray. – The Voice of Northeastern Kenya
Xiisadii Siyaasadeed ee Hirshabeele oo Xal laga gaaray.
Star FM February 13, 2019
Masuuliyiinta ugu saraysa mamaul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeele ayaa lagu soo waramayaa inay xal ka gaareen Isfahan waagii dhanka siyaasada ahaa ee todobaadyo ka hor soo kala dhexe galay Madaxda xukuumada Hirshabeele iyo baarlamaanka.
Ilaa markii madaxweynaha Maamulka Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare uu magacaabay golihiisa wasiirada ayaa waxay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay qaab uu madaxweynuhu u maray magacaabida wasiiro Cusub ay ka dhexaysay baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Xildhibaanada Hirshabeele qaarkood ayaa talaabada madaxweynuhu wasiirada iskushayndhaynta ugu sameeyay iyo magacaabista ku Tilmaamay mid sharciga aan waafaqsanayn waxayna sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyeen inuu wax isdabamarin sameeyay.
Sadexdii Cishe ee la soo dhaafay waxa uu hakad ku yimid kulamadii baarlamaanka hirshabeele ay ku yeelan lahaayeen magaalada Jowhar oo ay ku doonayeen in madaxweynuhu baarlamaanka hor yimaado si wax looga waydiiyo eedaymaha loo soo jeediyay.
Wararkii ugu danbeeyay ee ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in madaxweyne Waare uu kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanadii ka soo horjeeday ugu danbayntii xal laga gaaray dhamaan waxyaabihii la isku khilaafsanaa.
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeeli Sheikh Cismaan Bare Maxamed ayaa lagu wadaa inuu manta baarlamaanka u jeediyo khudbad uu kala hadlayo xalka siyaasadeed ee laga gaaray khilaafkii ka dhex jiray madaxda maamulka Hirshabeele iyo Tabashadii ay xildhibaanadu soo gudbiyeen madxweynuhuna ka dhagaystay.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeele qaar ka mid ah ayaa madaxweyanah ku eedaynayay inuusan waxba ka qaban arimo ay ka mid ahaayeen xaaladaha ka jira deegaanada maamulkaas,Rabshada ka dhacay magaalada Balcad ee gobolka shabeelada Hoose,qorshaha ka bixitaanka kunka askari eek a tirsan ciidanka AMISOM ee deegaanada gobolka shabeelada dhexe iyo qodobo kale.
Xldhibaanada Hirshabeele ayaa sheegay inay walaac badan ku abuurtay qorshaha kunka askari ee AMISOM ay dabayaaqada bishaan uga baxayaan gobolka shabeelada dhexe,waxay sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyeen inuu shaqsiyaad ay aad isugu dhawaayeen uu u magacaabay xilalka wasiirada Hirshabeele.
← Madaxweynaha Maraykanka oo ku baaqay inay iscasisho Ilhaan Cumar
Guddoomiya guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in dastuurka la bedelo →
dhageyso warka fiiidnimo ee idaacadda star fm 20:30 pm 23-04-2019 April 23, 2019
Shacabka kudhaqan xaafada kamoor ee magaalada mandera kacabanaayo April 23, 2019
Fataahdyo ka dhacay dalka Konfur Africa April 23, 2019
16 qof oo ku dhimatay dhulgariir ku dhuftay wadanka Filibin April 23, 2019
Farmaajo iyo Dhiggiisa dalka Masar oo ka wada hadlay xaaladda Gobolka April 23, 2019
Wasiirka waxbarashada oo sheegay in la sii wadi doono tababarka macalimiinta ee manhajka cusub April 23, 2019
Aas loo sameeyay qaar ka mid ah dadkii lagu dilay wadanka Siri Lanka April 23, 2019
Dowladda dalka oo wacad ku martay inay sii wadi doonto tababarka macalimiinta ee manhajka cusub. April 23, 2019
Baroordiiq loo sameynayo dadkii ku nafwaayay weerarkii lagu qaaday Siri Lanka April 23, 2019
Maxkamada sare ee Myanmar oo racfaan ka diiday suxufiyiin u shaqeynayay Reuters April 23, 2019
dhageyso warka fiiidnimo ee idaacadda star fm 20:30 pm 23-04-2019
Shacabka kudhaqan xaafada kamoor ee magaalada mandera kacabanaayo
Fataahdyo ka dhacay dalka Konfur Africa
16 qof oo ku dhimatay dhulgariir ku dhuftay wadanka Filibin
Farmaajo iyo Dhiggiisa dalka Masar oo ka wada hadlay xaaladda Gobolka
Wasiirka waxbarashada oo sheegay in la sii wadi doono tababarka macalimiinta ee manhajka cusub
Aas loo sameeyay qaar ka mid ah dadkii lagu dilay wadanka Siri Lanka
Dowladda dalka oo wacad ku martay inay sii wadi doonto tababarka macalimiinta ee manhajka cusub.
Baroordiiq loo sameynayo dadkii ku nafwaayay weerarkii lagu qaaday Siri Lanka
Maxkamada sare ee Myanmar oo racfaan ka diiday suxufiyiin u shaqeynayay Reuters